ကျွန်မ တို့ လင်မယားက ဒလံ ဆိုရင် အခုလို ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ခံရ ပါ့မလား လို့ ဒဲ့ ရှင်း လာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ကျွန်မ တို့ လင်မယားက ဒလံ ဆိုရင် အခုလို ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ခံရ ပါ့မလား လို့ ဒဲ့ ရှင်း လာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
ကျွန်မ တို့ လင်မယားက ဒလံ ဆိုရင် အခုလို ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ခံရ ပါ့မလား လို့ ဒဲ့ ရှင်း လာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
“ကျွန်မတို့ လင်မယားက ဒလံ ဆိုရင် အခုလို ဖ မ်းဝရမ်း ထုတ်ခံရ ပါ့မလားရှင် ” ဆိုပြီးဖြေရှင်း လာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချော သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသု တို့ ဇနီး မောင်နှံဟာ ဆိုရင် လူထု လှုပ် ရှားမှုတွေကို ဖေဖော်ဝါရီ လပိုင်းကနေစပြီး အခုချိန်ထိ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်း ပါဝင် နေကြ သူတွေပဲဖြစ် ပါတယ်နော်။ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေ တဲ့ အခြေအနေများ ကြောင့် တိမ်းရှောင် နေရ ပေမဲ့ လည်း နေ့စဉ် ရက်ဆက် သတင်း အချက်လက်တွေကို သူမရဲ့လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ ကနေ တစ်ဆင့်မျှဝေ ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ခုလိုမျိုး တိမ်းရှောင် နေတဲ့ အတော အတွင်းမှာလဲ
သူမတို့ ဇနီးမောင်နှံနဲ့ ပတ် သက်ပြီး ကောလာ ဟာလ များစွာ ထွက်ရှိ နေ တာ ကြောင့် သူမရဲ့ Facebook အ ကောင့် ကနေ ပြန် လည် ဖြေရှင်း ပြောခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါ တ ယ် နော်။ အခြေ အမြစ် မရှိတဲ့ page နဲ့ website မှာ ပိုင်ဖြိုးသုက ပြောကြားလာ ပါတယ် ဆိုပြီး တင်ထားတဲ့ သတင်းတွေ့ လိုက်လို့ပါ … သူရေးထား တာ ကလည်း တကယ်ကို ယုံလောက် စရာ အကွ က် ကျကျ ဇာတ်လမ်း ဆင်ရေးထား တာပါ အခုဒီမှာ အဲဒီ့ interview ရဲ့ link ကို မထည့် ပေးဘူးဆိုတာ ကျွန်မထည့် ပေးလိုက်မှ အဲဒီ့ page အခုထက် reach ကောင်းသွားမှာ စိုးလို့ပါ (လက်ရှိတောင် သူ့ post က share 5.7K) ရည်ရွယ် ချက်ရှိရှိ နဲ့ကို ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ် စေ မယ့်ခေါင်း စဉ်တပ် ရေးထား တာပါ…။အဲဒီ့ post အောက်မှာ ဝိုင်းဝန်း စွပ်စွဲ ပြောဆိုထား သူများကို လည်း
မေးချင် လို့ပါရှင် ကျွန်မတို့ လင်မယားက ဒလန် တွေဆိုရင် ဝရမ်းထုတ် ခံရပါ့မလား ???ကျွန်မတို့သာ အမှန်တရား ဘက်က မရပ်တည် ချင်ရင် အသာလေး ရေလိုက်ငါးလိုက် ရေသာခို နေကြမှာပေါ့ရှင် …။(အဲ့သလို နေနေကြ သူတွေလည်းရှိနေတာပဲ)အများစိတ် ဆင်းရဲနေ ရချိန်မှာ ကိုယ့်ဒုက္ခ တွေမဝေမျှ ချင်ပေမယ့် ဒီတစ်ခု တော့ အတိ အကျ ကျွန်မပြောပါရစေ။ ကျွန်မ ပိုင်ဖြိုးသု သည် မည်သည့် အသွင်ပြောင်း media အတု page အတုကိုမျှ interview ဖြေကြား ထား ခြင်းမရှိပါအရေးတော်ပုံ ကြီးအောင်မှဝရမ်းပြေးဘဝအ တွေ့ကြုံ များဆိုပြီး တစ်ရက် သက်သက် ပြောပြရဦးမယ်….”ဆိုပြီး လက်ရှိ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ ကောလ ဟာလ သတင်းအတု တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြန် လ ည်ဖြေရှင်း လာတာကြောင့် ပရိသတ်တွေ လည်းသိရှိစေရန် အတွက် တစ်ဆင့် ပြန်လည် ကူးယူတ င် ဆက် ပေးလိုက် ရပါတယ် နော်။ ဖတ်ရှု ပေးတဲ့ပရိတ် သတ်ကြီးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင် ရှိပါတ ယ်နော်.။
“ကြၽန္မတို႔ လင္မယားက ဒလံ ဆိုရင္ အခုလို ဖ မ္းဝရမ္း ထုတ္ခံရ ပါ့မလားရွင္ ” ဆိုၿပီးေျဖရွင္း လာတဲ့ ပိုင္ၿဖိဳးသုပရိသတ္ႀကီးေရ မင္းသမီးေခ်ာ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္ၿဖိဳးသု တို႔ ဇနီး ေမာင္ႏွံဟာ ဆိုရင္ လူထု လႈပ္ ရွားမႈေတြကို ေဖေဖာ္ဝါရီ လပိုင္းကေနစၿပီး အခုခ်ိန္ထိ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေနၾက သူေတြပဲျဖစ္ ပါတယ္ေနာ္။ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေန တဲ့ အေျခအေနမ်ား ေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ ေနရ ေပမဲ့ လည္း ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ သတင္း အခ်က္လက္ေတြကို သူမရဲ႕လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ ကေန တစ္ဆင့္မွ်ေဝ ေပးေလ့ ရွိပါတယ္။ခုလိုမ်ိဳး တိမ္းေရွာင္ ေနတဲ့ အေတာ အတြင္းမွာလဲ
သူမတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ေကာလာ ဟာလ မ်ားစြာ ထြက္ရွိ ေန တာ ေၾကာင့္ သူမရဲ႕ Facebook အ ေကာင့္ ကေန ျပန္ လည္ ေျဖရွင္း ေျပာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါ တ ယ္ ေနာ္။ အေျခ အျမစ္ မရွိတဲ့ page နဲ႔ website မွာ ပိုင္ၿဖိဳးသုက ေျပာၾကားလာ ပါတယ္ ဆိုၿပီး တင္ထားတဲ့ သတင္းေတြ႕ လိုက္လို႔ပါ … သူေရးထား တာ ကလည္း တကယ္ကို ယုံေလာက္ စရာ အကြ က္ က်က် ဇာတ္လမ္း ဆင္ေရးထား တာပါ အခုဒီမွာ အဲဒီ့ interview ရဲ႕ link ကို မထည့္ ေပးဘူးဆိုတာ ကြၽန္မထည့္ ေပးလိုက္မွ အဲဒီ့ page အခုထက္ reach ေကာင္းသြားမွာ စိုးလို႔ပါ (လက္ရွိေတာင္ သူ႔ post က share 5.7K) ရည္႐ြယ္ ခ်က္ရွိရွိ နဲ႔ကို ထင္ေယာင္ ထင္မွားျဖစ္ ေစ မယ့္ေခါင္း စဥ္တပ္ ေရးထား တာပါ…။အဲဒီ့ post ေအာက္မွာ ဝိုင္းဝန္း စြပ္စြဲ ေျပာဆိုထား သူမ်ားကို လည္း
ေမးခ်င္ လို႔ပါရွင္ ကြၽန္မတို႔ လင္မယားက ဒလန္ ေတြဆိုရင္ ဝရမ္းထုတ္ ခံရပါ့မလား ???ကြၽန္မတို႔သာ အမွန္တရား ဘက္က မရပ္တည္ ခ်င္ရင္ အသာေလး ေရလိုက္ငါးလိုက္ ေရသာခို ေနၾကမွာေပါ့ရွင္ …။(အဲ့သလို ေနေနၾက သူေတြလည္းရွိေနတာပဲ)အမ်ားစိတ္ ဆင္းရဲေန ရခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ဒုကၡ ေတြမေဝမွ် ခ်င္ေပမယ့္ ဒီတစ္ခု ေတာ့ အတိ အက် ကြၽန္မေျပာပါရေစ။ ကြၽန္မ ပိုင္ၿဖိဳးသု သည္ မည္သည့္ အသြင္ေျပာင္း media အတု page အတုကိုမွ် interview ေျဖၾကား ထား ျခင္းမရွိပါအေရးေတာ္ပုံ ႀကီးေအာင္မွဝရမ္းေျပးဘဝအ ေတြ႕ႀကဳံ မ်ားဆိုၿပီး တစ္ရက္ သက္သက္ ေျပာျပရဦးမယ္….”ဆိုၿပီး လက္ရွိ ျပန႔္ႏွံ႔ေနတဲ့ ေကာလ ဟာလ သတင္းအတု ေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ျပန္ လ ည္ေျဖရွင္း လာတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ လည္းသိရွိေစရန္ အတြက္ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ ကူးယူတ င္ ဆက္ ေပးလိုက္ ရပါတယ္ ေနာ္။ ဖတ္ရႈ ေပးတဲ့ပရိတ္ သတ္ႀကီးကို အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ ရွိပါတ ယ္ေနာ္.။
Previous post လမ်းပေါ် ထွက်နေကြတဲ့ လူငယ်တွေ အားရှိဖို့ အတွက် မိမိတို့မှာ ရှိတာလေးတွေ ကို ရက်ရက်ရောရော လှူဒါန်းကြတဲ့ စေတနာရှင်ပြည်သူများ
Next post အသံတိတ် သပိတ်ကြီး မှာ ပြည်သူ ထဲက ပြည်သူ တစ်ယော က် အနေနဲ့အသီးသီး ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ အနုပညာရှင်များ